Ngo-2017, e Voronezh uzoqala umsebenzi walo enye esiteshini sesitimela. Le phrojekthi luzoqala esizeni esiteshini sesitimela "Voronezh-Pridacha". Lokhu kungenxa yokuthi esiteshini ubudala, asisakwazi ukumelana nalomsebenzi nge imisebenzi yayo. Ngokusho M. Akulov, okulesi likamongameli Railways esiteshini "Voronezh-Pridacha" uzothola ukubukeka okusha hhayi kuphela, kodwa futhi igama elisha "Voronezh-South".
Isiteshi esisha kuzothatha indawo umxhwele, ukubaluleka eyeqa eziyinkulungwane square metres. Esikhathini project 'Voronezh-Pridacha "kulungiswe esiteshini sesitimela bathunjelwa akhawunti kokubili izici lobuchwepheshe kanye neziphakamiso mayelana nokuthuthukiswa kwengqalasizinda umgibeli esiteshini.
Umthamo we egumbini lokulinda, okuyinto izokwakhiwa kanye sakhiwo esisha "Voronezh-Pridacha" esiteshini kuyoba abantu abangamakhulu ayisihlanu. Eduze kwalo kuzokhishwa kube ukudla endaweni ngefomethi enkantolo ukudla.
Sasicabanga abadali iphrojekthi ezintsha futhi mayelana abashayeli. Kubo, esiteshini sesitimela "Voronezh-Pridacha" sizothola yokupaka yesimanje izimoto angamakhulu amaningana. Uzobona viaduct, okuzokwenza ukuxhuma esiteshini izindawo Voronezh, Vai futhi ibhange kwesokunxele.
Kulo nyaka, esiteshini "Voronezh-Pridacha" labelwa ruble abangaba yizigidi ezingu-mahlanu. Ngu abameleli Russian Railways Inkampani futhi Voronezh kwabaphathi bedolobha aphansi phezulu afuna abaxhasi, kanye nemithombo mali eyengeziwe iphrojekthi. Vele kudingeka ruble ayizigidi ezingu anamakhulu mathathu.
Imizamo yokuqala ukwakha sesitimela entsha e Voronezh ku-site esiteshini "Pridacha 'wazenza zaba eminyakeni embalwa edlule. Kodwa-ke, ngo-2014, baye bahluleka ngenxa yokuntuleka banal kweemali ukuqaliswa ngisho isigaba sokuqala le phrojekthi.
Okwamanje, ebhekisela ukwakhiwa entsha ujantshi ngesivinini esikhulu, okuzokwenza ukuxhuma emzini Adler naseMoscow, iphrojekthi wathola umoya wesibili. line high-speed siyodlula Voronezh. Lokhu kusho ukuthi amandla angeziwe kuyodingeka sesondlo yayo.
Iqiniso lokuthi esiteshini esisha "Voronezh-South" yakhiwe, kusemasisha kakhulu ukusho. Kodwa isikhala esitholakalayo wenziwa olwesimanje futhi balungisa namuhla. Isiteshi eside besidingeka hhayi kuphela izimonyo, kodwa futhi ukukhanda ayisisekelo.
Amandla ukuhamba izitimela elide futhi izitimela, esebenza "Voronezh-abakhulu", kunabayeni ivolumu, okuyinto ethatha izintambo "Pridacha" (Voronezh). Hlelo - ubufakazi kakhulu lokho.
Iningi izitimela umgibeli oza eningizimu, ezifana Anapa, Adler, Sochi, Novorossiysk, Yeysk, Krasnodar, Rostov-on-Don, sidlula esiteshini sesitimela "Pridacha".
Kungxenyekazi esiteshini ezisemadolobheni "Voronezh-Chief", isenkabeni yedolobha, wenze stop kuphela izitimela ngokuqinile. Speed izingoma nazo lihambe "ukuhlabana."
Naphezu kweqiniso lokuthi ikhono ukuze ithuthukise ujantshi "Pridacha" esiteshini kubhekwa ngonyaka, nokuphathwa Railways wahlola eziningana izixazululo ehlukile ezingase ukuhlangabezana nezidingo ngesivinini legatsha "Moscow-Adler."
Ngenxa reference iphuzu sasibhekwa njengophawu lokuthi sesitimela a Plate isigodi esincane, okuyinto amakhilomitha ambalwa ukusuka Voronezh. Loluhlelo yabizwa ngokuthi "West".
Ngokusho kwakhe, lo jantshi kwadingeka ukuba circumnavigate Semiluki, elinye idolobha Voronezh esifundeni. Le phrojekthi inqatshelwe ngenxa yobuningi izindawo zemvelo ukuthi zivikelwe isimo futhi ngendlela ephezulu ijubane wesitimela.
Loluhlelo yesibili ehlongoza ukuba kwakhiwe isikhungo onguthelawayeka ngesivinini ngqo emzini Voronezh. On ibhange kwesokunxele edolobheni, endaweni sesitimela, lapho ngenxa hypermarket Metro elise zokuhamba, kokuvula ungene onguthelawayeka federal "Don", obekumele zikhule kujantshi.
Ibanga into kusukela maphakathi, kanye khona kule ngxenye ibhange kwesokunxele ukuthuthukiswa zokuhlala obukhulu kwakungavunyelwe uhlelo lwesibili enye ukuletha futhi ibe yinto engokoqobo.
I elikhulu watholakala inketho eyodwa kabanzi ngawo kakhulu. "Pridacha" esiteshini Voronezh iyoba esiteshini esisha, okuzokwenza ukuxhuma eMoscow Adler. Kulesi impambano iyokwakhiwa eduze zamanje indandatho umgwaqo Ostuzhevskogo.
Uma iphrojekthi luyasetshenziswa, isikhathi nohambo kusukela Voronezh ukuba Adler kuyoba amahora emihlanu nengxenye kuphela. Namuhla, umgibeli izitimela kuthatha okungenani amahora ayishumi nesithupha. Umgwaqo kusukela Voronezh eMoscow kuzothatha amahora amabili nesigamu esikhundleni eziyisithupha.
I speed esiphezulu ozokhula isitimela emgwaqeni omkhulu "Moscow-Adler" kuyoba amakhilomitha amane ngehora. High-speed onguthelawayeka akulona ukumangala kuphela Russian Railways ukuphathwa uye walungisa izakhamuzi Voronezh. Mhlawumbe ngokushesha kakhulu ekukhanyeni-komzila wesitimela azosebenza.
Kuyoba ukuxhuma sezindiza Chertovitskoye, ujantshi isiteshi esisha "Voronezh-South" kanye Maphakathi nedolobha elikhulu. Kabusha futhi yesimanje sesitimela ekhona "Voronezh-abakhulu" - kungenye isihloko ingxoxo.
Njengoba isisu abahleli ezisemadolobheni, esiteshini nasezindaweni ezizungezile, manje noma ngokuhamba kwesikhathi kuyoba uguqule ukubukeka kwayo ngale ukuqashelwa. Eqinisweni, esiteshini Nimelwe ukuzalwa ngokusha, nezakhamuzi bakhe esikhathini esidlule komuzi lizofana edumile olungaphambili lwesonto, uhlamvu ekhangayo Voronezh yesimanje.
Kusukela eCrimea Sochi kanjani ukuze uthole? Kerch isikebhe
Base "ipulazi kumkhulu sika" ku Astrakhan esifundeni: incazelo, amasevisi kanye nokubuyekeza
I-Federal University yaseNingizimu. Southern Federal University: izikhwama
Uphawu negama commercial: Ngokwesibonelo. ukuqokwa Commercial - kungcono ...
Omiswe amakhabethe: ukukhetha
Uchungechunge lwezihloko ezithi "umuzwa lesishiyagalombili": nabalingisi izindima
Umkhuba omusha ukudla - Latin Ikhishi